Iindawo ezi-6 ezibalulekileyo zokundwendwela eFuerteventura | Ukuhamba kwe-Absolut
Ukuhamba kwe-Absolut | | IItary Islands
Ihlobo liyaphela kwaye ekwindla kuqala, ixesha lonyaka elibonakaliswa kukuncitshiswa kweeyure zasemini, ukwehla kwamaqondo obushushu, kwaye kunokuba njani kungenjalo, ukubuyela esiqhelweni. Uthotho lwezinto ezingunobangela we-post-vacation syndrome ephethwe yinxalenye enkulu yabemi. Kodwa ungakhathazeki, iinyanga zikaSeptemba, Okthobha kunye neyeNkanga zikwayinto enye nokuhamba, ngakumbi ukuba sikwenza oko iindawo ezinelanga ezifana neFuerteventura.
Ilanga likhanya kangangeentsuku ezingama-300 ngonyaka kwesi siqithi seCanary archipelago esikuLwandlekazi lweAtlantic. Ithuba elikhethekileyo lokonwabela esi siqithi sehlobo elingunaphakade kwenye yeehotele zabantu abadala kuphela eFuerteventura, ngelixa ngaphezulu kweekhilomitha ezili-150 zamanxweme zikwenza uzive useparadesi. Ungaphoswa zezi ndawo zibalulekileyo zokundwendwela eFuerteventura.
1 IiNdunduma zeCorralejo Park Park
2 Usingasiqithi weJandía
3 Idolophu yaseBetancuria
4 Imiqolomba ka-Ajuy
6 UMyuziyam waseMajorero
IiNdunduma zeCorralejo Park Park
Iikhilomitha ezingama-35 kuphela ezahlukileyo ePuerto del Rosario, ikomkhulu leFuerteventura, ukusuka kwiNdalo yeNdalo yeeNdunduma zaseCorralejo. Le ntsimi yesanti yemvelaphi yezinto eziphilayo (ethi ibangelwe kukuwohloka nokucocwa koonokrwece beemollusk, ii-bivalves, kunye nezinye izinto eziphila elwandle) inendawo engaphezulu kwama-2.600 eehektare zesanti emhlophe entle. Inkangeleko yentlango yale ndawo ikhuselweyo ifihla enye yezona zilwandle zininzi zeparadesi kwesi siqithiUlwandle lwaseCofete. Ngeekhilomitha ezili-12 zesanti emhlophe entle namanzi aluhlaza, le ndawo isendle ekumantla usingasiqithi weJandía inika abahambi imvakalelo engenakuchazwa yenkululeko noxolo.
Sahlulwe kuyo yonke iFuerteventura yi-Isthmus yoDonga, ekumazantsi esiqithi, IJandía Peninsula yenye yeepaki ezinkulu zendalo kwiziqithi zeCanary. Indawo eyinkqantosi apho unokufumana eyona ndawo isendle yesiqithi sasehlotyeni laphakade. Indawo eyoyikekayo egcina ukwahluka okukhulu kwezityalo ezinje ngesimboli seFuerteventura, icardon de Jandía. Ukutyelela le ndawo yomlingo akukho nto ingcono kunokuhlala eIberostar Selection Fuerteventura Palace, ihotele enofikelelo olukhulu kwiindlela zomhlaba ezinxibelelana neJandía Peninsula.
Idolophu yaseBetancuria yasekwa ngo-1404 nguJean de Bethencourt, owoyisa okokuqala iiCanary Islands. Le dolophu incinci ibekwe kunxweme olusentshona lwesiqithi Yayilikomkhulu lezolawulo eFuerteventura kude kube ngo-1834Nangona kungoku nje ingumasipala omncinci onabemi abangama-800 nje. Ngaphandle kokungabikho kweelwandle zeparadesi, le dolophu yezakhiwo ezimhlophe zemveli injalo eyona ndawo inomdla kwinkcubeko kwesi siqithi. Amakhulu abahambi bandwendwela le ndawo yonke imihla ukutyelela icawa yaseSanta María de Betancuria, ekumbindi wedolophu, okanye kwiMyuziyam yeArchaeological, apho iindwendwe zinethuba lokubona indlela ababehlala ngayo abemi bayo bamandulo.
I-Ajuy yeyona ndawo inomdla kakhulu kwi-Canary archipelago. Le lali incinci yokuloba inabemi abali-150 kuphela, ebekwe kunxweme olusentshona yeFuerteventura, ibalasele kunxweme lwayo oluhle olunentlabathi emnyama olungqongwe ziingxondorha kwaye, ikakhulu, emiqolombeni yayo yendalo. Ingaphakathi lemiqolomba yase-Ajuy, ibhengezwe njengesiKhumbuzo seNdalo kwaye yamkelwa njengelinye leendawo ezilikhulu kwezona zinto zibalulekileyo emhlabeni yi-Union ye-Geological Sciences (IUGS), evumela abahambi ukuba bazi imvelaphi kunye nokwakhiwa kweFuerteventura malunga neminyaka engama-70 ezigidi eyadlulayo. Uhambo lomlingo oluya kwixesha elidlulileyo lesiqithi apho unokubona khona amatye amadala kwiiCanary Islands, kwindawo ebizwa ngokuba yiBasal Complex.
Intaba yaseTindaya imi kumantla ntshona eFuerteventura, ecaleni kwedolophu engaziwayo kumasipala waseLa Oliva. Yabhengeza ilitye lesikhumbuzo lendalo ngo-1994 ngobume balo obugqwesileyo nobume bejoloji, ingoyena umfuziselo wesiqithi, le ndawo yaziwa kakhulu phantse i-300 podomorphic engra (Imizobo yamatye emile okweenyawo) enxulunyaniswa nenkcubeko yemveli yesiqithi. Ii-majos okanye i-majoreros, abemi bakudala baseFuerteventura, babecinga ukuba iTindaya yintaba engcwele kwaye babela iipropathi zobugqi kuyo. Ngapha koko, iTindaya yaziwa njenge "Intaba Yamagqwirha".
Asinakushiya iFuerteventura ngaphandle kokunandipha ezinye zeemveliso eziqhelekileyo zesityebi sayo sokutya. Nangona abahambi abaninzi bengazi, UFuerteventura uvelisa enye yezona chees zeebhokhwe zibalaseleyo emhlabeni, eyamkelweyo ziiNtshatsheli zeHlabathi zeTshizi, inikezela ngeshizi iMajorero Maxorta njengeyona ibalaseleyo emhlabeni kudidi lweshizi yobisi lweebhokhwe oluphilileyo kunye neencasa. Ngale ndlela, abathandi boku kutya abanakuphuthelwa yiMajorro Cheese Museum, apho banokufumana khona imvelaphi kunye nemveliso yemveliso eyaziwayo kwilizwe liphela.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukuhamba kwe-Absolut » Iindawo ezi-6 ezibalulekileyo zokundwendwela eFuerteventura
Yintoni ongayibona kwi-Biarritz
Iidolophu ezintle kufutshane neBarcelona